कोरोना कारण नेपालमा थप ६ जनाको ज्यान गग्यो, ९०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि — onlinedabali.com
कोरोना कारण नेपालमा थप ६ जनाको ज्यान गग्यो, ९०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको ज्यान गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले मंगलबार देशभर थप ६ जनाको ज्यान गएको जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३०६ पुगेको छ ।
त्यसैगरी देशभर थप ९०२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ४८ हजार १३८ जना संक्रमित भएका छन् ।
मंगलबार थप २२८७ जनाले कोरोना जितेर घर फर्र्किएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या ३२ हजार ९६४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा निको हुने प्रतिशत बढेको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप ३९६ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार काठमाडौंका ३००, भक्तपुरका ५८ र ललितपुरका ३८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा उपत्यकामा थप ३९६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।